कसरी प्रभावकारी सम्बन्धको साथ डिजिटल परिवर्तनको स्वामित्व Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 26, 2017 सोमबार, जनवरी 18, 2021 जोर्डन फीस
तपाईका ग्राहकहरु अधिक सजग, सशक्त, माग, विवेकी, र मायावी बन्न पुगेका छन्। विगतका कार्यनीतिका र मेट्रिक्सहरू अब मानिसहरूले डिजिटल र जडित संसारमा कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने कुरासँग पign्क्तिबद्ध छैन।
टेक्नोलोजी मार्केटरहरूले कार्यान्वयन गरेर ब्रान्डले ग्राहकको यात्रा हेर्ने तरिका मौलिक रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछन्। वास्तबमा, Trans 34% डिजिटल रूपान्तरण सीएमओ द्वारा नेतृत्व गरिएको छ तुलनात्मक रूपमा केवल १%% CTOs र CIOs द्वारा नेतृत्व गरिएको।
मार्केटरहरूको लागि, यो पारी दोहोरो तरवारको रूपमा आउँदछ। डिजिटल रूपान्तरणको उपयोग गरेर, CMO हरूले ग्राहक यात्राको साथ प्रत्येक माइक्रो-मुहिमलाई प्रभाव पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, संग परिवर्तनमा 70०% प्रयासहरू असफल संगठनहरूमा, कसरी डिजिटल रूपान्तरण मार्केटर्स द्वारा अग्रसर सफलता देख्न सक्दछन्?
प्रभाव २.० लाई प्रस्तुत गर्दै: प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्य
यस विकसित भइरहेको परिदृश्यमा तपाईंको बाटो पत्ता लगाउन तपाईंलाई मद्दतको लागि, हामीसँग साझेदार्यौं TopRank मार्केटिंग र ब्रायन सोलिस, प्रिंसिपल एनालिस्ट, अलटाइटर ग्रुप, अमेरिकन एक्सप्रेस, M मे, एडोब, र माइक्रोसफ्ट सहित प्रमुख उद्यमहरूका कार्यकारी बजारहरूलाई सर्वेक्षण गर्न। हाम्रो मिशन? कसरी प्रभावकारी मार्केटिंगको अभ्यास विकसित भइरहेको छ र आजको "प्रभावकारी मार्केटिंग" र भोलिको "प्रभावकारी सम्बन्ध" बीच बिन्दुलाई जोड्ने एउटा रूपरेखा प्रदान गर्न।
प्रभाव २.०: प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्य प्रभावकारी सम्बन्धको संसारको बारेमा पत्ता लगाइरहेको छ - एउटा नयाँ अनुशासन जसले सबै सम्बन्ध-संचालित मार्केटिंगलाई पार गर्दछ, समानुभूति र ग्राहक केन्द्रितताको आधारमा निर्माण। यो नयाँ अनुसन्धानले प्रभाव २.० रणनीतिहरूमा प्रकाश पार्छ, जसले बिक्री, ग्राहकको सन्तुष्टि, र अवधारणलाई प्रभाव पार्ने समूहलाई एकपटक एकताबद्ध गर्दछ।
पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
जबकि म तपाईंलाई अत्यधिक प्रोत्साहित गर्दछु पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस् अनुसन्धान प्राप्त गर्न तपाईलाई विश्वासका साथ यस नयाँ भूभागमा नेभिगेट गर्न आवश्यक छ, म तपाईंलाई रिपोर्ट भित्र तीन प्रमुख अन्तरदृष्टिमा एक लुकेको झलक दिनेछु।
प्रभावकारी कार्यक्रम मालिकहरू र सage्लग्नता काटिएको छ
प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्यलाई असर गर्ने मुख्य चुनौतिहरू मध्ये यो एक प्रायः कम्पार्टलेइज्ड हुन्छ। यसले कार्यकारी ध्यान कमाउन र ठूलो डिजिटल रूपान्तरण प्रयासलाई फाइदा पुर्‍याउने प्रभावलाई रोक्दछ। एकै साथ हामीले यो पनि सिक्यौं कि डिजिटल रूपान्तरण र प्रभावकारी सम्बन्धहरूले व्यापारको हरेक पक्षलाई एक समान प्रभाव पार्दछन्।
हामीले त्यो पत्ता लगायौं R०% प्रभावकारी कार्यक्रमहरू मार्केटिंगको स्वामित्वमा हुन्छन्, तर माग कार्य, PR, उत्पादन, र सोशल मीडिया सहित अन्य कार्यहरू, सक्रिय रूपमा प्रभावकारको साथ संलग्न। %०% मार्केटरहरू भन्छन् कि तीन वा अधिक विभागहरू प्रभावकारीहरूको साथ काम गर्दछन्, यसको मतलब मार्केटिंगको परम्परागत एकल मालिकको सट्टा क्रस-फंक्शनली स्वामित्वको हुनु पर्छ। कार्यकारी ध्यान कमाउन र प्रत्येक टच पोइन्टमा ग्राहकको यात्रालाई प्रभाव पार्न प्रभावलाई यी विभिन्न प्रकारका कार्यहरूमा चैम्पियनहरूको समूह आवश्यक पर्दछ।
प्रभावकारी सम्बन्धहरू ग्राहक यात्राको निपुणताबाट प्रभावित
केवल आधा (% 54%) विपणनकर्ताहरूले गत वर्ष भित्र ग्राहक यात्रालाई म्याप गरेका छन्। यात्राको म्यापिंग गरिरहेका कम्पनिहरूका थोरै बहुमतले रणनीतिक, ग्राहक केन्द्रित परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्दछ जुन मार्केटि team टोली पछाडि विशाल लहर प्रभाव पार्दछ। यात्रा म्यापिpping कम्पनीहरूले अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न आवश्यक छ र अन्तमा, एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ।
यदि तपाईं एक इन्फ्लुएन्सर रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट (आईआरएम) प्लेटफर्मको साथ ग्राहक यात्रा म्यापि process प्रक्रिया पूरक हुनुहुन्छ भने, तपाईं तपाईंको व्यवसायमा सबै मुख्य प्रभावकर्ताहरूलाई मात्र पहिचान गर्नुहुने थियो, तर प्रत्येक ग्राहक ग्राहकले कसरी विशिष्ट यात्रालाई प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ। ब्रायन सोलिस, प्रधान विश्लेषक, Altimeter समूह
ग्राहक यात्रा को प्रत्येक चरण मा तपाइँको ग्राहकहरु लाई कसले प्रभावित गर्छ भनेर पत्ता लगाउन तपाइँ तपाइँको ब्राण्डमा प al्क्तिबद्ध सबै भन्दा राम्रो प्रभावकारिता पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, ग्राहक म्यापि process प्रक्रिया अनिवार्य नयाँ प्रभावकर्ताहरूको अनावरण गर्दछ जसले महत्वपूर्ण चरणहरूमा निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्दछ। ग्राहक म्यापि process प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा मार्केटर्सलाई प्रभावकारी मार्केटिंग प्रयासहरूमा पुनर्विचार गर्न धक्का दिन्छ।
प्रभावकारी बजेट विस्तार रणनीतिक प्राथमिकता संकेत गर्दछ
सामान्य रूपमा प्रभावकारी मार्केटि approachमा पुग्न जारी गर्नाले तपाईं आफ्नो ब्रान्डको नियन्त्रण र ग्राहकहरू नियन्त्रणमा रहेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउनुहुनेछ। यो समय प्रभावकारी सम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिन हो। नेताहरूले रणनीतिक रूपमा प्रत्येक ग्राहकको टचपोइन्टको साथ प्रभाव पrs्क्तिबद्ध गर्न पर्छ तर, तिनीहरूले पनि एकमा लगानी गर्नुपर्छ प्रभाव सम्बन्ध व्यवस्थापन प्लेटफर्म अधिक प्रभावी ढ run्गले चलाउन र दीर्घकालीन संलग्नताहरू अनुकूलन गर्न।
मार्केटरको% 55% प्रभावकारी बजेट विस्तार गर्न अपेक्षा गरिन्छ। बजारका लागि बजेट जो एक टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छन् अधिक खर्च गर्ने more 77% योजना। तलको चार्टहरुमा हेरेर, यो द्रुत रूपमा स्पष्ट हुन्छ कि आउने महीनहरुमा प्रभावकारी मार्केटिंग बजेटको विशाल बहुमत विस्तार हुनेछ।
यदि तपाईं व्यापार मा हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रभाव को व्यवसाय मा हुनुहुन्छ। परिवर्तन सँधै एक बजेट लाइनमा सुरू हुन्छ त्यसैले तपाईंलाई संगठनमा केही च्याम्पियन चाहिन्छ भनेर हामी भन्न प्रयास गर्दैछौं र के हुन्छ हेर्नुहोस्। फिलिप Sheldrake, पार्टनर प्रबन्धक, Euler पार्टनरहरू
प्रभाव २.० को लागि फाउन्डेशन सेट गर्दै
अब तपाइको पालो। एक मार्केटरको रूपमा कसरी तपाईं द्रुत ट्र्याक डिजिटल रूपान्तरण गर्नुहुन्छ? कसरी ग्राहकहरूले निर्णय लिन्छन् र उनीहरूलाई कसरी प्रभावित गर्दछन् भन्ने बारे सिक्दै। तपाईंको प्रभाव २.० ज्ञान लिनुहोस् यी तीन प्रमुख खोजहरूको पछाडि। दश कार्यक्षम चरणहरू प्राप्त गर्न र प्रभाव २.० को लागि स्थापनाको साथ सुरू गर्न, डाउनलोड गर्नुहोस् प्रभाव २.०: प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्य। यात्रा म्यापिpping, डिजिटल रूपान्तरण, र प्रभाव बारे आज बढि जान्नुहोस्।
टैग: altimeter समूहब्रायन एकलग्राहक यात्राप्रभाव २प्रभाव २प्रभाव २.०: प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्यप्रभावप्रभावकारी विपणनप्रभावकारी प्रोग्राम मालिकहरूप्रभाव सम्बन्ध व्यवस्थापनIRMफिलिप Sheldrakeट्र्याकर
जोर्डन फीस मा प्रभावकारी मार्केटिंग प्रबन्धक हो ट्र्याकर, एक प्रभावकारी प्रबन्धन प्लेटफर्म। जोर्डन नवीन विचारकहरू र मार्केटिंग स्पेसमा परिवर्तन गर्ने एजेन्टहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न उत्साहित छ। ट्वीट गर्न नहिचकिचाउनुहोस् @jfeiseee तपाइँको सबै प्रभावशाली सम्बन्ध सम्बन्ध प्रश्नहरूको साथ।
InMoment अध्ययन निजीकरण6अप्रत्याशित कुञ्जी प्रकट गर्दछ